Company - Hebei Samsung Metal wocingo Co., Ltd
Anping Sanxing wocingo Factory lasekwa ngo-1990, nto leyo elenza ngobuchule welding locingo ,panel welding locingo ,ezinamacala locingo ,ucingo link ityathanga , crimped wire mesh, stainless steel wire olunemingxuma ,ukubiyela isefu ,zandiswa umnatha metal , window screen , galvanzied square locingo , fiberglass mesh , nothango lwaso lobhedu umnatha , neengcingo ezihlabayo , Njengesitshetshe sokuguya ngocingo oluhlabayo , ucingo emnyama annealed , cut wire etc. iimveliso zethu ezisetyenziswa kakhulu kushishino, ezolimo, nokulima, ulwakhiwo, ezothutho kunye nezimbiwa. Ngoku sele kwasekwa ubudlelane zoshishino kunye nabathengi 45 ukusuka mpuma Asia, eAsia, eYurophu, kuMbindi Mpuma, Afrika, kwaye kane isixa ukuthengiswa kunye nabathengi ngonyaka.
Kukho 5 iinkampani sebe uthathe 19000 yezikwere, abasebenzi abanezakhono 165 no 10000 Iitoni umthamo ngenyanga ukusingatha imiyalelo umthamo ezahlukeneyo.
Sinento iqela lokuthengisa ayaphelela iimpawu esisiseko elijongene kubathengi, non-yokumisa nangokuhamba ukusukela inkqubela, nokubonelela okulungileyo inkonzo yasemva ukuthengiswa. Ngaphezulu kwama-15 intengiso oversea ukuthetha IsiNgesi kwaye ube neminyaka engaphezu kwama-4 amava omsebenzi yi-avareji.
abasebenzi bethu 20 asakhulayo kunye kwiminyaka engaphezu kwama-10 nge-avareji uyakwazi ukuphuhlisa iimveliso 5 ezintsha ngenyanga. Okokuqala ofisi yethu aphesheya nokuqokelela infomantion intengiso ke ziphuhlise imveliso entsha leyo ezifunwa yimarike nguwo.
ISO 9001, ISO14001 kunye SGS certifiedOur inkqubo yolawulo lomgangatho ziyahambelana nemimiselo ISO 9001, ISO14001 kunye nezikhokelo SGS kwaye khangela inyathelo ngalinye kwinkqubo yemveliso. Thina ukuthenga izinto kbavelisi eyaziwa kakuhle eTshayina, kwaye ahlole izinto phambi kubekwa. 6 lokuhlolwa yethu Izixhobo I-Quality Deparment bings e Equipments uhlolo-6 yaye liqhuba uhlolo pre-delivery imveliso yokugqibela.
Sinethemba kwiimveliso zethu ukusebenza kakuhle kunye nexabiso faverable. Asigungqi imigaqo-4 yomgangatho, ixabiso, ukuthembeka kunye iinkonzo ziphunyezwa ngokufanayo kulo kwiintengiso.